April 30, 2020 - Online Hartha
နိုင်ငံခြားသားရောက်ရှိနေထိုင်မှုအား သတင်းပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်သည့် COVID-19 အတည်ပြုလူနာအမှတ်-၄ (Case-04) အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ ဇနီးအား အရေးယူဆောင်ရွက် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ (Case-04) အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားသော ကိုကျော်လင်းထက် (Mr. Sean Tan) သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ (၁၉-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် လူမှုရေးဗီဇာဖြင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှတဆင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာအိမ်ရာရှိ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သိင်္ဂီအေးစိုး နေအိမ်တိုက်ခန်း၌ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားသော သားနှစ်ဦးနှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ရာ မြို့နယ် လဝကရုံးသို့ နိုင်ငံခြားသားရောက်ရှိနေထိုင်မှုအား Form C ဖြင့် သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားခြင်း မရှိသည့်အတွက် သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားရန် ပျက်ကွက်သည့် အိမ်ရှင် ဒေါ်သိင်္ဂီအေးစိုးအား (၂၄-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့က ချမ်းမြသာစည်တရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါအမှုအား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် တရားရုံးမှ ရာကြီးအမှတ်(၄၃၂/၂၀၂၀)ဖြင့် အမှုအား လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသားရောက်ရှိနေထိုင်မှုအား … Read more
ယခုကဲ့သို့ တုပ်ကွေး ရာသီအစတွင် ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုးဖြစ်ရုံနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေး မှုများ လုပ်ဆောင်သွားရန် ရှိသည်ဟု C0V I D-19 ရောဂါရှာဖွေရေးတာဝန်ခံ ပါမောက္ခ ဋ္ဌေးဋ္ဌေးတင်(NHL)က ပြောသည်။ တုပ်ကွေးရာသီအစဆိုသည်မှာ မည်သည့် အချိန်ကာလကို ရည်ညွန်းသည်ကိုတော့ ပါမောက္ခ ဋ္ဌေးဋ္ဌေးတင်က ထည့်သွင်း ပြောသွားခြင်း မရှိပေ…. “ အခု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ကွာရန်တင်းကို စစ်မယ်၊ နောက်တစ်ခုက ထိတွေ့လူနာ မှန်သမျှကို စစ်မယ်။ ဆေးရုံတတ်တဲ့ လူနာမှန်သမျှရော၊ အခုလို ဖျားနာလာတဲ့ တုပ်ကွေးရာသီအစမှာ ဖျားတယ်၊ ချောင်းဆိုးတယ်ဆို သံသယရှိ လူနာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး စစ်မယ်ဆိုတော့ ပိုမိုတိုးချဲ့ပြီး စစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက … Read more
မူလက ခန့်မှန်းပေးခဲ့သော မုန်တိုင်း (၁ နာရီ မိုင် ၆၀ ကျော်) နှင့် ကမ်းတက်နိုင်သည့် ဒေသများ…
မူလက ခန့်မှန်းပေးခဲ့သော မုန်တိုင်း (၁ နာရီ မိုင် ၆၀ ကျော်) ကမ်းတက်နိုင်သည့် ဒေသများ…. ကပ္ပလီ ပင်လယ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လေဖိအားနည်းရာ ရပ်ဝန်းမှ မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်လာနိုင်ခြေများကို ၂၆ ရက် ဧပြီ လက စတင်ပြီး ဆက်တိုက် သတိပေးခဲ့ပါတယ် . မူလက ခန့်မှန်းပေးခဲ့သော မုန်တိုင်းငယ် ကမ်းတက်နိုင်သည့် ဒေသများသည် မွန်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်း နဲ့ ရခိုင် ပြည်နယ် တို့ ခန့်မှန်းချက်အားလုံး သည် ပြင်ဆင်ရန် ယာယီဟု အသိပေးခဲ့ပါသည်…။ ၃၀ ရက် ဧပြီလ နံ နက် ၁၁ နာရီ တိုင်းတာ ချက်များအရ အမေရိကန် ပညာရှင်များ ဂျာမာန် ပညာရှင်များ နဲ့ … Read more
အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Sinon ကို အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Sinon က အခုဆိုရင် ကမ္ဘာကသိတဲ့ ဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကတော့ မချောမွေ့ခဲ့ပါဘူး။ Sinon က သူငယ်စဉ်က Gay တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့် မိဘတွေရဲ့ ပစ်ပယ်မှုကိုခံခဲ့ရပြီး လမ်းပေါ်မှာ အိမ်ခြေရာမဲ့တစ်ယောက်အဖြစ် (၁၈)လလောက် နေထိုင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ခြေရာမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Sinon က ဒီကနေ့မှာတော့ သူငယ်စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေဆီမျှဝေထားပါတယ်။ Sinon က “လွန်ခဲ့တဲ့ 14နှစ်က ကျတော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတစ်ခုပါ။ ကျတော် အဲ့မှာ သိခဲ့ရတာက လူအချင်းချင်းအမြဲတမ်းကြင်နာပါ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကမ္ဘာကြီးက မင်းကိုမကြင်နာတောင်မှပေါ့။ တစ်ခြားသူတွေက မင်းကိုမကြင်နာရင်တောင်မှပေါ့။ အမြဲတမ်း လူတစ်ဖက်သားကို ကြင်နာပါ။” … Read more
ဒီနေ့ကလေးလေးတစ်ယောက် 84လမ်း41ဒေါင့်နားမှာ သရက်ကင်ဗန်းလေးကိုင်p တစ်ဖက်ကရင်ဘတ်လေးဖိလိုက်ဆိုင်ကယ်တွေကိုလိုက်တားလိုက်လုပ်နေတယ် မျက်နှာလှမ်းကြည့်တော့လဲ မျက်နှာကမကောင်းဘူး😞😞 တစ်ယောက်မှလဲဆိုငိကယ်ကိုရပ်မပေးကြဘူး သူ့ကြည့်ပြီးသနားလာတာနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုသူ့ဘေးနားထိုးရပ်ပြီး ကလေး ဘာဖြစ်လို့လဲ ​နေမကောင်းဘူးလား မေးတော့ သူအသက်ရှုတွေကြပ်တယ်တဲ့ အသက်ရှုမဝဘူးတဲ့ မောနေရှာတယ် ချွေးတွေလဲပြန်လို့ သူ့ကိုလမ်းဘေးနေရိပ်တဲ့နေရာခနထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး ဘာလုပ်ပေးရမလဲမေးတော့ အာဖျန်းဆေး လိုချင်တယ်တဲ့😢 သူ့သုံးနေကျဟာလေးက အိမ်မှာမေ့ကျန်နေခဲ့တာတဲ့ သူ့ပိုက်ဆံလေးကြည့်တော့လဲအကြွေလေးတွေပဲရှိရှာတယ် ဗန်းထဲမှာလဲ သရက်ကင်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ် ကျွန်တေိာလဲသနားပြီး ကလေးဆေးနာမည်သိလားလို့မေးတော့ သူသိတယ်တဲ့ အဲ့တာဆို လာဆိုငိကယ်ပေါ်တတ် သွားဝယ်မယ်ဆိုp ဆေးဆိုင်မှာ သူ့အတွက်အာဖျန်းဆေး လိုက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ် လက်ထဲလဲ6ထောင်ပဲပါခဲ့တာ ဆေးက4500 ပေးရလို့တော်သေးတယ် သူအဲ့ဆေးလေးသုံးလိုက်တော့ အရမ်းမသက်သာပေမယ့် ခုနကလောက်မဆိုးတော့ဘူး သူ့အကြောင်းနည်းနည်းမေးကြည့်တော့ သူ့အသက်က၁၂နှစိပဲရှိသေးတယ် 6တန်းတက်နေတာ😞 အဖေမရှိတော့ဘူးတဲ့😢😢 အမေတော့ရှိတယ်တဲ့ အမတစ်ယောက်လဲရှိတယ်ပြောတယ် အမကလဲအိမ်ထောင်ကျသွားတော့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အဆင်မပြေဘူး သူ့အမေကလဲသူများတွေကိုလိုက်နှိပ်ပေးရတာတဲ့😢 မိသားစုက ​အဆင်မပြေဘူးတဲ့ ​နေနေတဲ့အိမ်ကလဲ ကျူး တဲ့ 😢😢😢 … Read more
တနေ့က အလုပ်ခွင်ထဲ ဂျပန်လူမျိုးအလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ဘေးမှာ ပိုက်ဆံတွေ အထပ်လိုက်ရေနေတယ်။ (စာမမှနျပါက အောကျတှငျဆကျဖတျပါ) မြန်မာငွေနဲ့ဆို သိန်း(၃၀၀)နီးပါးတော့ ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အနားမှာ လာရေတွက်နေတာဆိုတော့ ကိုယ်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် ဖျတ်ခနဲ ကြည့်မိလိုက်တယ်။ မျက်စိလျင်တဲ့ သူဌေးက ပိုက်ဆံတွေရေနေရင်းနဲ့ ပြုံးပြီး လှမ်းမေးတယ် ” ယူမလား ” တဲ့။ ကိုယ်လည်း ပြုံးပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ” မယူပါဘူး ” လို့..။ ( နို့ ယူမယ်ပြောလည်း ရမှာမှ မဟုတ်တာချည်းကိုး ) ပြောချင်တာက အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပိုက်ဆံတွေမြင်တော့ ” ငါလည်း ထီလေးဘာလေး ထိုးဦးမှပါ” လို့ သူဌေးလုပ်သူကို ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းလေး ပြောလိုက်တယ်။ ထီပေါက်ရင် ဘာလုပ်မှာလဲတဲ့။ ထီပေါက်ရင် ကိုယ်အရင်ဆုံး … Read more
မင်း ၃နာရီမှ ထမင်းစားရတာဆိုတဲ့ case-4 သိစေရန် ရေးတဲ့စာ မန္တလေးသားတွေစေတနာမမွဲဘူး မင်း ၃နာရီမှ ထမင်းစားရတာတော့ ငါတို့ မမြင်ရတဲ့အ တွက် မသိဘူး။ မင်း ဘယ်ကကူးလာမှန်း မသိဘဲ မင်းနဲ့အတူအလိုက်တသိ Quarantine နေပေးတဲ့ တိုက်တန်းမိသားစုတွေရယ် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအ ဖွဲ့ရယ် မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ရယ် ရပ်ကွက် အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့တွေရယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီး ရယ်ငါနာမည်ထည့်မရေးတော့ဘူး အရမ်းကူညီခဲ့ကြ တယ်။နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက် တဲထိုးပြီး ရင်ဘတ်တူညီနောင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မမ -၂၆ လူမှုကူညီရေးအသင်း ဧရာသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်း နဲ့အုပ်ချူပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီး ကော်မတီဖွဲ့ကူညီ ခဲ့တယ်။နေစဉ်အလှူရှင်မရှိတိုင်း B&C Cafe and Food ဆိုင်ကနေစဉ် ကူညီခဲ့တယ်။ပန်းပျိုးသူ ကိုမျိုးကြီးဦးဆောင်တဲ့ဂီတမာင်နှမများပရဟိတ အဖွဲ့ကမမ၂၇/၆မှာ အလိုက်တသိ Quarantine နေပေး တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းဖျော်ဖြေရေးတွေလုပ်ခဲ့ သေးတယ်။တိုက်တန်းတင်မဟုတ်ဘူး မင်းအဘွား နဲ့ကလေးတွေ … Read more
စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဝါစတုသျှတ္တရပညာအရ စကြာဝဠာထဲမှာ အလို အလျောက် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေရော လူသားတွေ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ မည်သည့်အရာမဆို အကုန်လုံးမှာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ စွမ်းအင် ရှိနေကြတယ်ဆိုတာ လေ့လာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်တွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေ များလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံရသလို လာဘ်ပိတ်တာတွေ။ ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေ ဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် ငွေကြေး အဆက်မပြတ်ဝင်သလို၊ ကျန်းမာ ချမ်းသာကာ၊ ငွေကုန်ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ဘေလ်၊ ပြေစာဟောင်းများ၊ receipt ဟောင်းများ ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီး … Read more
“Covid-19 တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်” (စာမမှနျရငျ အောကျသို့ဆကျဖတျပါ) အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID 19 တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရေးသားတဲ့အခါ အချိန်လဲ မရတာကြောင့် တချို့အရာတွေကို မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲ တင်ဆက်သွားပါမယ်။ ဘဏ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ သက်ဆိုင်သူတွေက လေ့လာပီးဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အများပြည်သူ သိသင့်တာတွေကိုပဲ ဖော်ပြသွားပါမယ်။ ဒီစီမံကိန်းမှာ ရည်မှန်းချက် ၇ ရပ်၊ ဗျူဟာ ၁၀ ခု၊ Action Plans ၃၆ ခုနဲ့ Action ၇၆ ခု ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၊ ၂ နဲ့ ၃ မှာကတော့ ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ အလုပ်သမားကဏ္ဍတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၄ ကတော့ အိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချခြင်းပါ။ … Read more
မေလ ၁ ရက်မှ ၈ ရက်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော မုန်တိုင်းငယ်နှင့် မိုးလေဝသ အခြေအနေ… မုန်တိုင်းငယ်စတင်ဖြစ်နိုင်ရက်က မေ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း လို့ပြသလာပါတယ်။ ဒါက မြန်မာဘက် ဝင်နိုင်ခွင့်နည်းသွားသလို ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှဘက် အိန္ဒယဘက်ကို တိမ်းနိုင် ယိမ်းနိုင် ရှိလာပါတယ်။ မုန်တိုင်းငယ်ဟာ ကနဦးမှာ မြောက်နဲ့ အနောက်မြောက်(NNW) ဘက်ဦးတည်နိုင်ပြီးမှ မေလ ၄ ရက်မှစပြီး အရှေ့မြောက်ရွေ့နိုင်တယ်လို့ ပြထားသလို မြန်မာ-ဘဂ်လား နယ်စပ်ကိုလည်း ဦးတည်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ထူးခြားချက်က အဲဒီ မေလ ၄ ရက်မှ ၈ ရက်အတွင်းက အထက်လေစီးကြောင်း (ပဲ့ထိမ်းလေ စီးကြောင်း) က အနောက်နဲ့ အနောက်တောင်(WSW) ဘက် တိုက်နေလို့ မြန်မာကမ်းဘက်လာနိုင်ဖို့ များနေတာကို သတိပြုစေလိုပါတယ်။ … Read more